Fizahan-tany Anguilla: fitsapana COVID-19 izay lohalaharana amin'ny paikady fanokafana indray
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Anguilla Travel News » Fizahan-tany Anguilla: fitsapana COVID-19 izay lohalaharana amin'ny paikady fanokafana indray
Minisitry ny fizahantany Haydn Hughes
Fanambarana momba ny fitakiana fanandramana manerantany CDC nataon'i Anguilla's
Hon. Minisitry ny fizahantany Haydn Hughes
Ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny aretina sy ny fisorohana aretina (CDC) dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa ny 26 Janoary 2021 rehetra, ny mpandeha fiaramanidina iraisam-pirenena rehetra izay mankany Etazonia, anisan'izany ireo izay niverina avy nanao vakansy, dia tsy maintsy manatrika antontan-taratasy an-tsoratra manamarina ny valin'ny fitsapana COVID-19 ratsy. nalaina tao anatin'ny 3 andro taorian'ny fiaingan'ny sidina. Ireo mpandeha izay tsy mahavita an'izany dia tsy mahazo miditra.
Ny fanandramana no lohalaharana Anguillapaikady fanokafana indray - ao anatin'izany ny fitsapana ny fahatongavany sy ny fiaingany. Noho izany, ny takian'ny CDC amin'ny fitsapana ny fiaingana ho an'ireo mpitsidika rehetra miverina any Etazonia dia ny Anguilla izay manana fahaizana mitantana amin'ny fomba mahomby.
Izahay raha ny marina dia efa manome an'ity serivisy ity amin'ny fangatahana ho an'ny vahiny. Miaraka amin'ny fanampian'ny governemanta UK amin'ny alàlan'ny Public Health UK, ampitomboinay ny fahafahanay mitsapa mba hahazoana antoka fa mahatratra ny tinady antenaina. Ny governemanta kanadianina dia nametraka fepetra mitovy amin'izany nanomboka ny 7 janoary 2021, ary ny fahefana ananan'ny Fanjakana anglisy dia nanomboka nanomboka ny zoma 15 janoary 2021 lasa teo.
Noraisinay ny fitandremana rehetra ary nampahafantatra ireo paikady hentitra mba hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana an'ireo mpitsidika sy ireo mponina ao an-toerana. Ny fitantanana mahomby an'ity aretina ity dia niteraka tranga 11 fotsiny hatramin'ny nanokafanay ny sisin-taninay tamin'ny Novambra lasa teo, ary tsy nisy fiarahamonina niparitaka.
Rehefa manohy mandray tsara ireo mpitsidika an'i Anguilla izahay, dia matoky izahay fa ny vahiny dia hanohy hanana traikefa fialan-tsasatra miavaka miaraka aminay.
Famaritana ny fomba fialan-tsasatra izao tontolo izao
UNWTO fifidianana sekretera jeneraly